တခြားမည်သည့်ပရိုဂရမ်မှသုံးစရာမလိုပဲ Ghost Windows7ကို ဘယ်လိုဖန်တီးမလဲ ??? ~ IT Guide Myanmar
တခြားမည်သည့်ပရိုဂရမ်မှသုံးစရာမလိုပဲ Ghost Windows7ကို ဘယ်လိုဖန်တီးမလဲ ???
အွန်လိုင်း နဲ့ ဘလော့မိတ်ဆွေများအားလုံး “မင်္ဂလာပါ”
ကျနော်လည်း အပြင်ဆားဗစ် တွေများလို့ ပို့(စ်)မတင်ဖြစ်တာ တပတ်လောက်ရှိပြီ ။
ဒီနေ့တော့ မိမိကွန်ပြူတာနဲ့ Window7ကို Ghost Image ဖန်တီးပြီးတော့
တခြားမည်သည့်ကွန်ပြူတာ ၌ မဆို ပြန်ပြီး Restore လုပ်လို့ရအောင်
ဘယ်လို ဖန်တီးမလဲ ဆိုတာလေးကို တင်ပြချင်ပါတယ် ။
မိတ်ဆွေတို့အတွက် အနည်းနဲ့ အများဆိုသလိုပဲ အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ အကျိုးရှိနိုင်မယ်ဆိုရင်ကျေနပ်ပါပြီ ။
Ghost Image ဖန်တီးနည်းကို အခြေခံကွန်ပြူတာ လေ့လာသူများအတွက် Ghost အသုံးပြုနည်း အသေးစိတ် ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ ကျနော်တင်ပေးဘူးပါတယ် ။ အဲဒီပို့(စ်) လေးက မိမိကွန်ပြူတာတစ်လုံးတည်းအတွက် Restore လုပ်နိုင်ယုံအတွက်ပါ ။
တခြား စက်တစ်လုံးမှာ သွားပြီး Restore လုပ်ရင် Boot မတက်နိုင်ပါဘူး ။ ဘာကြောင့်လည်း ဆိုတော့ အသုံးပြုထားတဲ့
Hardwere (အဓိက-CPU,Mainboard)ကစလို့ user,password,Timezone, အစရှိတာတွေမတူညီကြလိုပါပဲ ။
နောက်တစ်ခု ကျနော်ဝန်ခံချင်တာကတော့ အဲဒီလို Boot မတက်နိုင်တာကို တက်နိုင်အောင်ရေးတဲ့နည်းကိုတော့ကျနော်တကယ်ပဲမသိသေးပါဘူးခင်ဗျာ ။ ကျနော်သိထားတဲ့နည်းတွေထဲက တစ်ခုဖြစ်တဲ့
ဒီနည်းကတော့ ကျနော်ကိုယ်တိုင် အကြိမ်ကြိမ် မရေတွက်နိုင်လောက်အောင် သုံးခဲ့ဘူးပြီး 100% အောင်မြင်ခဲ့တဲ့နည်းလေးပါ ။
ခုကျနော်တင်ပြမယ့်နည်းက တခြားမည်သည့်ပရိုဂရမ်မှသုံးစရာမလိုပဲ ဝင်းဒိုးထဲမှာပဲပါနေတဲ့ Tool လေးကိုအသုံးပြုမယ့်နည်းလေးပါ ။
Sysprep ဆိုတာလေးပါ ။ ဒီကောင်လေးက ကျနော်တို့ Image ဖိုင်ဖန်တီးနိုင်ဘို့အတွက် လိုအပ်တာတွေကို ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပေးနိုင်ဘို့အတွက် ထည့်ထားပေးတာပါ ။ ဒီ စနစ်က Window ကို မူလအခြေအနေအတိုင်းပြန်ဖြစ်အောင် Backup လုပ်ပေးတဲ့စနစ်ဖြစ်ပါတယ် ။ သူအလုပ်လုပ်ပုံကတော့ Window က Detect Hardware အသစ် User/Password /TimeZone စတာတွေ အားလုံး Window စတင်တုန်းကလို အားလုံးအားလုံး အသစ်တွေနဲ့ ပြန်လည်စတင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲ WINDOW732/64 Bit မည်သည့် Version ကိုမဆို Ghost Image ဖန်တီးနိုင်ပြီး တခြားမည်သည့်ကွန်ပြူတာမှာပဲဖြစ်ဖြစ် Restore လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် ။
ကဲ ကျနော့ရဲ့နည်းလေးကို စကြရအောင်ပါ ။
အရင်ဦးဆုံး Computer Management ကိုဖွင့်လိုက်ပါ ။ Start>Computer(Right Click) >manage
ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း Windows Media Sharing - Run နေရင် Stop ကိုနှိပ်ပြီးပိတ်ပေးပါ ။
Start –> cmd ပြီးရင် Admin အဖြစ်နဲ့ Run ပေးပါ ။
cd sysprep ရေးပြီး Enter ခေါက်
sysprep ရေးပြီး Enter ခေါက်
ဒါဆို အောက်ကပုံအတိုင်းရလာမှာပါ ။ ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း ရွေးပေးပြီး OK နှိပ် ပါ
အားလုံးပြီးသွားရင် ပရိုဂရမ် ပိတ်သွားပါလိမ့်မယ် ။ နောက်ပြီး Restart ချလိုက်ပါ ။
ဒါဆိုရင် ကျနော်တို့ Ghost Image လုပ်ဘို့ အဆင်သင့်ဖြစ်ပါပြီ ။ ရလာတဲ့ Ghost ဖိုင်ကိုလည်း တခြားစက်တွေမှာ Restore လုပ်လို့ရပါပြီ ။
ကျနော်တင်ပြခဲ့တဲ့ အချက်တွေမှာ လိုအပ်ချက်တွေ ရှိခဲ့ရင်လည်း
Comment,C-Box တို့မှာဆွေးနွေးဝေမျှ ပေးကြစေချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ ။